Yintoni Ekhokelela Ngquzulwano Phakathi ko-Islam kunye neNtshona?
Ukungqubana phakathi kwe-West kunye ne-Islam kuza kubaluleka kwiinkqubo zehlabathi kwiiminyaka ezizayo. AmaSilamsi, eqinisweni, yodwa impucuko eye yabeka ukusabalala kweWest ngokungathandabuzekiyo-kwaye ngaphezu kweyodwa! Yintoni enomdla kukuba le mpikiswano ayiphumeli nje ngokungafani phakathi kweenkcubeko ezimbini, kodwa kubaluleke ngakumbi ukufana kwazo.
Kuthiwa ukuba abantu abafana kakhulu abakwazi ukuhlala kunye kunye, kwaye kuyafana neenkcubeko ngokufanayo.
Bobabini i-Islam kunye nobuKristu (ekhonza njengento yokudibanisa imveli eNtshona) yi-absolutist, iindidi zonqulo. Zombini zizonke, ngombono wokwenza amabango ukuba afake kuwo wonke umntu ngaphandle kohlanga olunye okanye isizwe. Boba bobabini bezithunywa zevangeli ngokwemvelo, bebede benze umsebenzi wokufundisa ngokuziphendulela kunye nokuguqula abangakholwayo. Bobabini iJahad kunye neNtshontsho yezoBukhosi zibonakaliswa kwezopolitiko zale mibono yenkolo, kwaye zombini zifana ngokufanayo.
Kodwa oku akuchazi ngokupheleleyo ukuba kutheni i-Islam iye yaba neengxaki ezininzi kunye nabamelwane bayo bonke, kungekhona nje kwiNtshona.
Kuzo zonke iindawo, ubudlelwane phakathi kwamaSulumane kunye nabantu bezinye iinkcubeko - amaKatolika, amaProtestanti, amaOthodoki, amaHindu, amaShayina, amaBuddha, amaYuda - aqhelekanga; Uninzi lwaloo dlelwane lugonyamelo ngexesha elidlulileyo; abaninzi banobundlobongela kuma-1990.
Naluphi na umntu ekhangelelene nomda we-Islam, amaSulumane aneengxaki zokuhlala ngokuthula nabamelwane bawo. AmaSulumane ayenzela malunga ne-yesihlanu yabemi behlabathi kodwa ngo-1990 baye baxhamla kakhulu kubudlobongela beqela phakathi kwabantu beyiphi na imiphakathi.
Izizathu ezininzi zinikezelwe ukuba kukho ubundlobongela obuninzi obunxulumene neentlanga zamaSulumane.
Esinye isisombululo esifanayo kukuba ubundlobongela bubangelwa yimperiyali yaseNtshona. Ulwahlulo lwezopolitiko olukhoyo phakathi kwamazwe luyilo lwezinto zaseYurophu. Ngaphezu koko, kusekhona intukuthelo phakathi kwamaSulumane ukuba yintoni inkolo yabo namazwe abo okumele banyamezele phantsi kolawulo lwamaKoloni.
Kungenokuba yinyani ukuba ezo zinto zenze indima, kodwa ziyanelisekanga njengenkcazo epheleleyo, ngenxa yokuba zihluleka ukunika ingqiqo ukuba kutheni kukho ingxabano phakathi kwamaSulumane kunye nabangewona aseNtshona, abancinci abangamaSulumane ( Sudan) okanye phakathi kwamaSilamsi amancinane kunye nabangewona aseNtshona, ubuninzi bamaSulumane (njengamaNdiya). Kukho, ngelanga, ezinye iindlela.
Enye into yokuba i-Islam, njengenkolo, yaqala ngokugqithisileyo - kungekuphela kukaMuhammad ngokwakhe kodwa nakumaxesha alandelayo emva kokuba amaSulumane asasazeka yimfazwe kulo lonke elaseMpuma Mpuma.
Umcimbi wesibini yiyo ebizwa ngokuthi "ukunyaniseka" kwamaSilamsi namaSulumane. Ngokutsho kukaHuntington, oku kuchaza ukuba amaSulumane awanakulungele ukuhambelana neenkcubeko xa abalawuli abatsha befika (umzekelo, kunye nekoloni), okanye abaMuslim abanakho ukuqonda ngokukodwa kwinkcubeko phantsi kolawulo lwamaSilamsi. Naluphi na iqela elincinane, lihlala lihluke - imeko engayifumani ukufanelana namaKristu.
Ngokuhamba kwexesha, ubuKristu buye buba bukhulu ngokwaneleyo kangangokuthi luya kulungelelanisa iikcubeko apho ihamba khona. Ngamanye amaxesha, oku kuyimvelaphi yentlungu kubafundi bezithethe kunye nabacebisi be-orthodox abaxhalabisayo ngolo hlobo; kodwa ke, utshintsho lwenziwe kwaye ulwahluke. Nangona kunjalo i-Islam ayikho (okwangoku?) Yenze uguquko olunjalo kwizinga elibanzi. Umzekelo omhle apho impumelelo ethile ifumaneke yayiza kuba ngamaSulumane amaninzi eMveli, kodwa ayingaphantsi kwinani.
Inqaku lokugqibela li-demographic. Kwiminyaka emininzi kwiminyaka kukho ukuqhutyelwa kwabantu kwilizwe lamaSilamsi, okukhokelela ekunyuseni okukhulu kwabesilisa abangasebenziyo phakathi kweminyaka eyi-15 neshumi. Izazi zenzululwazi eUnited States ziyazi ukuba eli qela lidala ukuphazanyiswa kweentlalo kwaye kubangele ubugebengu obuninzi - kwaye kwintlalo ecebileyo neleyo.
Kwilizwe lamaSilamsi, kunjalo, asifumani ubuncwane obuncinci kunye nokuzinza, ngaphandle kokunye phakathi kwabambalwa bezopolitiko. Ngaloo ndlela, ukuphazamiseka kwelo qela lamadoda lukhulu kakhulu, kwaye ukukhangela kwabo isisombululo kunye nesazisi kunokudala ubunzima obuninzi.
'Isifundo Sezandla' sikaLeonardo da Vinci '
I-Goodyear Wrangler All-Terrain Adventure IiTires kunye neKevlar
8 Izintandokazi zeHanukkah Iingoma
Indlela yokukhethwa kwendlela yakho yokukhwela umzobo
Yintoni Amanzi aqhelekileyo kwiGalofu yeGalofu?
Saudi Arabia | Iinkcukacha kunye neMbali
Izibikezelo zokuxhasa ukuqonda ukuFunda
I-Braking efanelekileyo: ABS vs. Non-ABS